Na ajụrụ m ajụjụ ahụ apụtaghị na ọ bụ echiche m - mana ọ bụ nchegbu maka m. Rute ugbu a, nwa m nwoke ahụmahụ na IUPUI dị ịtụnanya. Ọ bụ onye isi na Math na Physics onye tinyegoro nnukwu nlebara anya site na ịme mmekọrịta yana ịkparịta ụka n'etiti ndị ọrụ. Ndị prọfesọ ya amawo ya aka ma nọgide na-eme ya. Ha gosiputara ya umu akwukwo ndi ozo nke guru akwukwo karie.
Nchegbu m n’ebe agụmakwụkwọ dị bụ na ọtụtụ kwenyere na agụmakwụkwọ na-eme ka mmadụ ‘mara ihe’ ma ọ bụ nye ha ikike karịa ndị na-agụghị akwụkwọ. Enwere otutu ihe omuma atu n’akụkọ ihe mere eme ebe ndị gụrụ akwụkwọ been chịrị ndị isi chere echiche ruo mgbe ha gosipụtara dị iche. A na-emeso ha dị ka ndị ọzọ, ọ bụghị iwu. Otu okwu n'okwu a kwuru ya n'ụzọ zuru oke:
Ọ dị ka mmegbu, ma ọ bụghị nkwupụta, na-afọ nke nta ka 'a manyere ya' n'ọtụtụ ọnọdụ. Ngosipụta dị iche iche, na ọkwa niile, bụ akụkụ 'ihe ọchị' nke agụmakwụkwọ mahadum. Nye m, ngosipụta a bụ ihe mmụta agụmakwụkwọ kwesịrị ịbụ. M na-eche na PC nwee / na-egbochi oke echiche efu.
Otu ụdị saịtị ahụ dị n'ịntanetị ruo awa anọ tupu ndị ọrụ nchịkwa kagburu ohere ịntanetị nke Zuckerberg. Ngalaba na-ahụ maka kọmpụta wetara Zuckerberg n’ihu Adminlọ Ọrụ Nlekọta Mahadum Harvard, bụ ebe e boro ya ebubo na ọ dara iwu nchekwa kọmputa na imebi iwu na nzuzo Internetntanetị na ihe ọgụgụ isi.
Nke a bụ nwa akwụkwọ na otu mahadum kachasị ama ama na mba ahụ gosipụtara ikike ịchụ nta ego. Nzaghachi nke mahadum? Ha nwara imechi ya! Daalụ maka ịdị mma nke Mak na ọ gara n'ihu na mbọ ya ma hapụ ka ntọala ahụ kwụsị ya.
Otu nzaghachi nye Deepak bụ na agụmakwụkwọ onye ahụ nyere ya ike ịkọwapụta ihe ndị dị na gburugburu ya iji nye ya 'nghọta'. Ihe ahụ ọ̀ bụ nghọta? Ka ọ bụ ele mmadụ anya n'ihu ma ọ bụ ajọ mbunobi? Ọ bụrụ na ọgbọ na-akụzi otu ‘ihe akaebe’ na otu ụzọ e si asụgharị mgbanwe - anyị na - ezi ndị mmadụ ihe otú na-eche? Ka obu anyi na-akuziri ndi mmadu ihe na-eche?
Enwere m ekele maka ohere m nwere ịga mahadum na nrọ m bụ na ụmụ m gụsịrị akwụkwọ na kọleji. Agbanyeghị, ana m ekpe ekpere ka ha gụkwuo akwụkwọ, agụmakwụkwọ ụmụaka anaghị eduga ha omume nke hubris. Agụmakwụkwọ dị oke ọnụ apụtaghị na ị mara ihe, ọ pụtaghị na ị ga-abụ ọgaranya. Echiche efu, nghọta, na mkpebi siri ike dịkwa ka agụmakwụkwọ dị ukwuu.
William Buckley, onye nwụrụ n’oge na-adịbeghị anya, kwuru otu oge, “Ọ ga - akara m mma ka aha 2000 mbụ na akwụkwọ ekwentị Boston ga - achịkwa m karịa karịa dons nke Harvard."